23 herinandro ny bevohoka - fivoarana fetal. 23 herinandro ny fitondrana vohoka - firy volana isan'izany, inona no mitranga?
Ny herinandro faha-23 amin'ny fitondrana vohoka - ny fivoaran'ny foetus, ny fahatsapan'ny vehivavy sy ny loza mety hitranga
Rehefa mandalo ny "ekoatera" ny faharetan'ny vohoka, ny renim-pianakaviana miandry dia ampiasaina amin'ny toe-javatra misy azy ka manadino ny toe-javatra misy azy ireo. Na izany aza, ny herinandro faha-23 amin'ny bevohoka dia afaka manolotra "tsy ampoizina", noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra izay afaka manondro ny fandikana.
Herinandro maherin'ny 23 herinandro - firy volana?
Ny dokotera dia tafiditra amin'ny fanaraha-maso ny fitondrana vohoka, dia mamaritra ny faharetan'ny fitondrantena, mifototra amin'ny datin'ny andro voalohan'ny farany mialoha ny fikarakarana ny fadimbolana. Ity mari-pamantarana ity dia aseho foana amin'ny herinandro. Ny tenany, ny reny hoavy dia maniry ny handinika ny vanim-potoana amin'ny volana, ary noho izany dia misy ny fahasarotana amin'ny fandikan-teny.
Raha te handika herinandro mandavan-taona sy mahitsy dia mila mahafantatra karazana vitsivitsy ianao. Ny dokotera dia manatsotra ny karajia dia mitaky ny faharetan'ny volana mandritra ny 4 herinandro, ary ny isan'ireo andro isam-bolana dia 30. Raha jerena ireo nuages, dia afaka manisa izany 23 herinandro vohoka ianao - 5 volana sy 3 herinandro. Ny volana fahenina amin'ny fitondrana vohoka dia efa manakaiky , ary mialoha ny fisehoan'ilay zaza dia misy 17 fotoam-pangalatra.
23 herinandro ny fitondrana vohoka - inona no mitranga amin'ny zazakely?
Ny zaza amin'ny herinandro faha-23 amin'ny maha-bevohoka dia mitohy mivoatra sy mivoatra. Amin'izao fotoana izao ny pancreas dia manomboka mamorona insuline hormonina, izay mandray anjara amin'ny dingana metabolism. Ny milina koa dia miasa, izay mitondra ny fampidirana ny selan'ny rà. Ny fiovana mivaingana dia mitranga ao amin'ny atidoha: mitombo ny isan'ny fiolahana, ary mihalalina kokoa ny tebiteby.
Ny fanovana lehibe dia voamarika ao amin'ny rafi-pandaminana, izay efa vonona amin'ny asa. Isaky ny zazakely iray dia afaka mitelina ranon-dra kely kely avy amin'ny vatany miaraka amin'ny urine. Ao anatin'ilay tsiranoka dia miditra ao amin'ny tsinay ilay izy, izay niova fo ho ilay kalitao voalohany. Izy io dia manangona ary navela ho any ivelany ihany vao teraka.
23 herinandro ny fitondrana vohoka - fitomboan'ny lanjan'ny foetus
Isan'andro dia mihamitombo ny zaza ary mitombo ny halavan'ny vatany. Ny lanjany amin'ny herinandro faha-23 amin'ny fitondrana vohoka dia 500-520 g. Ny halavan'ny vatany, hatramin'ny satroboninahitra mankany amin'ny voditongotra dia 28-30 sm. Ny dokotera matetika dia mampiasa tarehimarika toy izany toy ny habetsaky ny coccyx-parietal, izay amin'izao fotoana izao 18-20 cm. Mariho fa ireo rafitra voalaza etsy ambony ireo dia averina, ary rehefa mandinika ireo fampitoviana amin'ny fampiroboroboana, ny mpampivelona dia manaiky foana:
haavon'ny ray aman-dreny;
Ny endriky ny sakafo amin'ny vehivavy bevohoka.
Herinandro vohoka 23 - fivoarana fetalina
Ny foetus amin'ny herinandro faha-23 amin'ny maha-bevohoka dia manatsara ny fahaizany sy ny fahaiza-manaony. Misy ny fampiatoana ny rafi-pitabatabana sy ny asam-barotra. Ny zaza mbola ho avy dia mitehaka amin'ny fanentanana ivelany: feo, hazavana, mozika. Amin'ny fampitomboana ny fikorontanana, ny reny dia afaka mamaritra raha tia azy na tsia. Amin'izao fotoana izao dia efa mivoatra ny rafitra fitiliana, ka mihamitombo ny amplitude sy ny tanjaky ny firongatry ny fikoropahana, ny fikorotanana ary ny fikorontanana.
Rehefa manomboka ny 23 herinandro vohoka, dia apetraka ny fitondran'ny zazakely. Mety ho hitan'ny mamanay fa amin'ny fotoana iray amin'ny fotoana iray dia maneho ny asany lehibe ilay ankizy, fa ny hafa kosa matory be. Amin'io tranga io dia tsy voatery hiorina amin'ny reny ny biorhythms ny zaza: maro ny reny voatery manitsy ny zanany hoavy, izay efa zatra miambina amin'ny hariva, ary indraindray amin'ny alina. Aorian'ny fiterahany, afaka mamaha ny fitondran'ny zazakely ny reny.
Inona no itovian'ny foetus amin'ny herinandro faha-23 amin'ny maha-bevohoka azy?
Ny zazakely amin'ny herinandro faha-23 amin'ny maha-bevohoka dia mitovy amin'ny zaza vao teraka. Ny tongony sy ny palmie dia lasa mitovy, ary ny ampahany amin'ny tarehin'ny karandoha dia mahazo ny endri-javatra tsirairay. Ny fonosana hoditra dia misy paompy maro ary matevina amin'ny volony tsara tarehy (Lanugo). Ny vatana dia mamokatra melanine bebe kokoa, izay manomboka mandoko ny volony amin'ny loha. Rehefa manao fanatanjahan-tena eo amin'ny rantsantanana, dia azo soratana ny takelaka fantsika, izay efa mahatratra ny sisiny amin'izao fotoana izao.
Mpivadi-pinoana tamin'ny herinandro faha-23 ny bevohoka
Amin'ny ankapobeny, ny ankizy dia mavitrika amin'ny herinandro 23. Ao amin'ny lavaka fananganana tranokala dia malalaka malalaka ny habaka malalaka. Fanampiana, somersaults, somersaults matetika no mamaritra ny reny mandritra ny andro. Zava-dehibe ny mitarika ny isany. Ny asan'ny motera, araka ny dokotera, dia mitana ny toeran'ny toetry ny toe-piainan'ny foetus, maneho ny fahasalamany.
Ny fametahana dia tokony atao mandritra ny andro, rehefa mazoto ny foetus. Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny fandrefesana toy izany dia ny fizaran-tany amin'ny 9 hatramin'ny 19 ora. Mandritra io fotoana io, ny reny dia tokony hanisa farafaharatsiny 10 isa-panaon'ny korontana. Ny fitomboana na ny fihenan-tsasatra amin'ity mari-pamantarana ity dia mety hanondro ny fitomboan'ny vohoka, anisan'izany ny:
Herinandron'ny Herin'ny Bevohoka - Inona no Mitranga Amin'ny Neny?
Rehefa mandinika fe-potoana toy ny herinandro 23 herinandro, izay mitranga amin'ny reny hoavy, ilaina ny manamarika ny fiakaran'ny vidin'ny lanja. Amin'izao fotoana izao dia mahazo 5-7 kg ny vehivavy manomboka amin'ny fiandohan'ny fitondrana vohoka. Isan-kerinandro, ny lanjan'ny vatan'ny vehivavy bevohoka dia mitombo isam-bolana 500. Zava-dehibe ny manara-maso io mari-pamantarana io, satria mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny foetus.
Miaraka amin'ny sarin'ny vehivavy bevohoka amin'ny 23 herinandro vohoka, dia miova ihany koa ny lalana. Nifindra toerana ny foibe, noho izany dia tsy maintsy nandeha ilay vehivavy, nanipy ny sorony indray. Rehefa mandeha an-tongotra ilay lanjany, dia mihazakazaka mankany amin'ny sisin'ny tongotra manohana, izay miteraka fomba fanao mahazatra ho an'ny vehivavy bevohoka. Mba hampihenana ny enta-mavesatra eo amin'ny hazavana, dia manoro hevitra ny dokotera amin'ny fampiasana ny fandefasana prenatal.
23 herinandro ny bevohoka - fahatsapana vehivavy iray
Rehefa 23 herinandro ny maha-bevohoka, ny fivoarana sy ny fihetseham-pon'ny renim-pianakaviana dia noho ny fiovan'ny hormone niova. Ankoatra izany, ny fivoarana haingana ny taova dia mahatonga ny taova anatiny hihetsika. Mifanohitra amin'ny fiovan'ny toetr'andro ireo, ny dyspnea sy ny fiterahana dia mahazatra. Hitan'ny vehivavy fa mihamitombo ny fihinanana, mihamitombo ny isan'ireo fihetseham-pon'ny respirato. Aorian'ny fisakafoanana midadasika, matetika ny vehivavy bevohoka dia mameno ny fiterahana, ny fanodikodinam-bola, izay mety ho vokatry ny famoahana ampahany ny sakafo amin'ny voankazo.
Amin'ity indray mitoraka ity dia voan'ny bala ihany koa ny atidoha. Eo ambany fanerena ny vatana, mihena ny habetsahany, mitombo ny isan'ireo antso ho an'ny famindrana. Noho ny fiovana toy izany, dia mihena ny habetsahan'ny urine. Izany toe-javatra izany dia fitsipika ara-physiolojika, noho izany, tsy ilaina ny mametra ny habetsaky ny mamo mofomamy, na dia ilaina aza ny mifehy izany (2 litatra isan'andro).
Belly amin'ny 23 herinandro vohoka
Amin'ny ankapobeny dia tokony ho 4 cm eo ho eo amin'ny metaly ny tranon-jaza mandritra ny 23 herinandro. Hatramin'io fotoana io, saika ny vehivavy rehetra no mahatsapa fiadiana (diso). Ireo dia tsy ara-dalàna, tsy dia misy fanaintainana sy tsy fahampian-tsakafo firy ny myometrium uterine dia tsy mahavokatra ary tsy miteraka ny fanombohan'ny asa amin'ny vehivavy. Rehefa manova ny toeran'ny vatana ianao, dia tsy hita intsony izy ireo.
Ny herinandrom-piainana 23 herinandro dia miaraka amin'ny fitomboan'ny haben'ny kibo - ny manafina izany amin'ny hafa dia tsy hahomby. Eo amin'ny tendron'ny hoditra dia mety hipoitra ny loko matevina, miala amin'ny foitra mankany am-pubis. Izy io dia miforona noho ny fiovan'ny hormona niova ary nanjavona tamin'ny tenany manokana tamin'ny fiafaran'ny vohoka. Misy marika maromaro maromaro afaka miseho eo amin'ny tendrony - striae, mba hiadiana amin'ny dokotera izay manoro hevitra amin'ny fampiasana menaka fihinana.
Fanolorana amin'ny fitondrana 23 herinandro - ny fitsipika
Amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia tsy miova ny fisintahana amin'ny 23 herinandro ny fitondrana. Izy ireo dia be dia be, loko mangarahara, indraindray marefo. Tokony tsy hisy ny fofona tsy mahafinaritra. Ny mpihaza dia manaiky ny fisian'ny menaka manitra. Ny fanolanana ny tsiranoka, ny fiovan'ny fihenan-tsakafo na ny habetsahana dia tokony ho fotoana hanaovana dokotera.
Ny loko maitso sy mavo amin'ny tsindrin-tsakafon'ny vavony dia manondro ny fisian'ny dipoavatra enti-mandringa na aretina amin'ny rafitra fananahana. Mba hampiorenana ny antony, mila mandeha amin'ny mpitsabo mpanampy ianao ary mahazo fanamarinana. Fihetseham-po ny fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tsy afaka ny hibaiko tanteraka azy ireo izy. Anisan'ireo antony mety hitranga:
Ny fahantrana tamin'ny herinandro faha-23 tamin'ny fitondrana vohoka
Rehefa tonga ny herinandro faha-23 amin'ny maha-bevohoka, dia miteraka aretim-bovoka ao aoriana sy aoriana amin'ny vehivavy bevohoka maro. Ireo fahatsapana mahatsiravina ireo dia mifandray amin'ny fitomboan'ny enta-mavesatra eo amin'ny tsangam-batana. Ny fanaintainana dia tsy manana toerana mazava ary mihamitombo rehefa avy lavitr'ezaka, fiasa ara-batana. Mba hampihenana ny herim-piainana, ireo mpampivelona dia manoro ny fandefasana manokana, izay alaina ihany amin'ny alina.
Amin'ny vanim-potoan'ny fitondrana vohoka mandritra ny 23 herinandro dia mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo ao amin'ny ra ny fampivoarana ny voan'ny tongotra, ary ny ampahany dia ny fanorenana ny fitaovan'ny musculoskeletal an'ny foetus. Vehivavy maro no mitaraina momba ny hoe miteraka matetika ny hozatry ny gastrocnemius izy ireo. Mba hisorohana io tranga io, ny dokotera dia mandefa ny siramamy vita amin'ny vitamina, izay misy kalcioma sy vitamin D.
Ultrasound amin'ny 23 herinandro
Ny ultrasound amin'ny 23 herinandro vohoka dia azo tanterahana manokana ho an'ny mari-pamantarana manokana. Ao amin'ny fijerena fanindroany, io fandalinana io dia atao eo anelanelan'ny 16 sy 20 herinandro. Mandritra ilay fianarana dia mandinika amim-pitandremana ny foetus ny dokotera, mamaritra ny habeny, manombana ny fahombiazan'ny rafi-pihariana foza. Ny fikarakarana manokana dia aloan'ny paracenter, manombantombana ny halavany, ny hateviny ary ny toerana, izay mety hiankina amin'ny 8 volana.
Ireo loza amin'ny herinandro faha-23 amin'ny bevohoka
Ny fe-potoam-piofanana mandritra ny 23 herinandro dia miantso ny dokotera ho azo antoka sy azo antoka. Ny loza ateraky ny fanalàn-jaza an-tsokosoko dia efa any aoriana - ny placenta dia mifatotra mafy amin'ny rindrin'ny tranonjaza. Na dia izany aza dia mbola misy ihany ny fahasarotana eo amin'ny fizotry ny fitondrana:
aretina mifindra amin'ny reniny (ARVI, gripa, ARI);
Mangatsiaka be mandritra ny fitondrana vohoka
Afaka mahazo bevohoka aho?
Tsy misy toxicose amin'ny fitondrana vohoka
Tombo-kase tantera miaraka amin'ny fitondrana vohoka
Dysplasia am-behivavy sy ny bevohoka
Fihetseham-po amin'ny vehivavy bevohoka - inona no tokony hatao?
Lady's Costume Jewelery
Mavo "Indian Summer" - famaritana ny karazany
Toasters - fiorenana tsara kokoa?
Kitapo vy fanoratana ho an'ny takela-by
Adenovirus - fitsaboana
Rahavavy Wachowski talohan'izay sy taorian'ny plastika
Trends vaovao amin'ny lamaody 2014
Tattoos White Flush
Arthritis Psoriaty - fitsaboana
Niche avy amin'ny plasterboard ho an'ny curtain